Dalxiiska Arooska: Neefsashada Nolol Cusub Safarka iyo Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aroosyada Jaceylka Malabka » Dalxiiska Arooska: Neefsashada Nolol Cusub Safarka iyo Dalxiiska
Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Aroosyada Jaceylka Malabka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Suuqa Qorsheynta Arooska ayaa kor u kacaya, waxaana laga yaabaa inay tahay kaliya dalxiiska dalxiiska ee loo baahan yahay si loo soo nooleeyo warshadaha safarka kadib faafitaanka.
Suuqa Qorsheynta Arooska Caalamiga ah ayaa la filayaa inuu ku kici doono heer aad u sarreeya inta lagu jiro xilliga saadaasha, inta u dhaxaysa 2021 iyo 2025.
2021, suuqa Qorshaynta Arooska waxa uu u korayay si aad u degan.
Iyada oo ay kor u kacday qaadashada istaraatiijiyadaha ee ciyaartoy muhiim ah, suuqa ayaa la filayaa inuu kor u kaco saadaasha saadaasha.
Nancy Barkley, Isuduwaha Dalxiiska Arooska waayo, Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) ayaa ku dooday in Dalxiiska Aroosku uu u baahan yahay qirasho dheeraad ah maadaama ay muhiim u tahay dhaqaalaha loo socdo. Waxay u sacabinaysaa Qolka Wararka Suuqa Daawashada sida ay u kala saartay tan war-saxaafadeedkoodii ugu dambeeyay, "Suuqa Qorshaynta Arooska 2021 Wadaagga Caalamiga ah, Cabbirka, Baahida Mustaqbalka, Cilmi-baarista Caalamiga ah, Ciyaartoyga Hoggaanka sare leh, Isbeddellada Soo baxaya, Gobolka Saadaasha 2025."
Bilowgii 2020, cudurka COVID-19 wuxuu bilaabay inuu ku faafo adduunka oo dhan, malaayiin dad ah oo adduunka oo dhan ah ayaa uu haleelay cudurka COVID-19, waddamada waaweyn ee adduunka ayaa dhaqan-galiyay mamnuucidda cagaha iyo amarada joojinta shaqada. Marka laga reebo sahayda caafimaadka iyo warshadaha wax soo saarka nolosha, badi warshadaha si weyn ayaa loo saameeyay, iyo warshadaha Benomyl ayaa sidoo kale si weyn loo saameeyay.
Warbixinta "Suuqa Qorsheynta Arooska" ee Caalamiga ah (2021-2025) waxay dabooshaa xogta soo-saareyaasha, oo ay ku jiraan shixnadaha, qiimaha, dakhliga, faa'iidada guud, diiwaanka wareysiga, qaybinta ganacsiga, iwm., taasoo ka caawisa macaamilka inuu si fiican u ogaado tartamayaasha. Warbixintani waxay sidoo kale khusaysaa dhammaan gobollada iyo dalalka adduunka, taas oo muujinaysa heerka horumarka gobolka, oo ay ku jiraan cabbirka suuqa, mugga, iyo qiimaha, iyo sidoo kale xogta qiimaha.
Intaa waxaa dheer, warbixintu waxay sidoo kale dabooshaa xogta qaybta, oo ay ku jiraan nooca qaybta, qaybta warshadaha, qaybta kanaalka iwm. daboolaya cabbirka suuqa kala duwan, mugga iyo qiimaha labadaba. Waxa kale oo ay dabooshaa macluumaadka macmiilka ee warshadaha kala duwan, taas oo aad muhiim ugu ah soo saarayaasha.
Global "Suuqa Qorsheynta Arooska" (2021-2025) waxay soo bandhigaysaa duruufo iyo rajada kobaca ee falanqaynta pin-point ee beddelka dhaqdhaqaaqa tartanka iyo aragtida mustaqbalka ee arrimo kala duwan oo kicinaya ama xakameynaya kobaca warshadaha. Suuqa Qorshaynta Arooska waxa uu bixiyaa falanqayn dhamaystiran oo ku saabsan cabbirka suuqa, saamiga, korriinka, baaxadda, iyo rajada laga qabo warshadaha Qorshaynta Arooska. Warbixintani waxay bixisa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si loo fahmo horumarka muhiimka ah ee kharashka suuqa ee suuqa Qorsheynta Arooska iyo isbeddellada ballaarinta qayb kasta iyo gobol kasta. Daraasaddu waxay la wadaagtaa waxqabadka suuqa ee Qorshaynta Arooska labadaba xagga mugga iyo dakhliga iyo qodobkan oo faa'iido u leh ganacsigana waxtar u leh. Hel tusaale PDF ah oo warbixinta ah.
Si aad u ogaato sida COVID-19 Faafa uu u Saameyn doono Suuqa Qorsheynta Arooska, Codso nuqul muunad ah oo warbixinta ah.
Ku saabsan Shabakadda Dalxiiska Adduunka
Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) waa codka daahsoon ee ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee socdaalka iyo dalxiiska ee adduunka oo dhan. Marka la mideeyo dadaallada, waxay horseed u tahay baahida iyo rabitaanka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo daneeyayaasha. Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ka soo baxday doodaha dib u dhiska. Doodda dib-u-dhiska.sofarka waxay bilaabatay Maarso 5, 2020, dhanka ITB Berlin. ITB waa la joojiyay, laakiin rebuilding.travel ayaa ka bilaabay Grand Hyatt Hotel ee Berlin. Bishii Disembar, rebuilding.travel wuu sii socday laakiin waxaa lagu dhex dhisay urur cusub oo la yiraahdo Shabakadda Dalxiiska Adduunka. Marka la isu keeno xubnaha gaarka ah iyo kuwa dawliga ah ee goobaha gobolka iyo caalamka, WTN kaliya uma doodo xubnaheeda balse waxay siisaa cod shirarka dalxiiska ee waaweyn. WTN waxay siisaa fursadaha iyo isku xidhka muhiimka ah xubnaheeda in ka badan 120 wadan. Riix halkan si aad xubin uga noqoto.